यो साता के होला शेयर बजार?
काठमाडौं, जेठ ११ : गत साता नेप्से परिसूचक १३१८ दशमलव ७१ विन्दुमा खुलेको थियो भने १३२२ दशमलव ८५ को ‘इन्ट्राडे’ उच्च विन्दु बनाएको थियो।
त्यसैगरी, ‘इन्ट्राडे’ न्यून विन्दु १३०४ दशमलव ५९ थियो भने बजार १३१४ दशमलव ५५ मा बन्द भएको थियो। यो अघिल्लो साताभन्दा ४ दशमलव १६ अंक अर्थात ० दशमलव ३१ प्रतिशतले गिरावट हो।
चित्र नं १ : साप्ताहिक मैनबत्ती प्रवृत्ति
विगत १२ महिनादेखि बजारको उतारचडाव कस्तो रह्यो भनेर हेर्नलाई चित्र नं. १ मा नेप्सेको साप्ताहिक मैनबत्तीहरु प्रयोग गरिएको छ। अघिल्लो साताको विश्लेषणको निष्कर्ष अनुसार बजारको मुख्य टेवा १३०० रहेको र प्रतिरोध १३३५ भनिएको थियो। यो साता बजार यही क्षेत्रभित्र उतारचडाव रहेको देखिन्छ।
चित्रमा देखिए बमोजिम यो साता बजार माथिल्लो प्रवृत्ति रेखाभन्दा माथि रहेको र २०० एक्पोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए)भन्दा बजारको प्रवृत्ति माथि नै रहेकाले हालसम्म बजार सकारात्मक क्षेत्रमा नै रहेको संकेत गर्दछ।
चित्र नं. २ : दैनिक मैनबत्ती प्रवृत्ति
चित्र नं.२, दैनिक मैनबत्ती प्रवृत्तिले यो साता नेप्सेको प्रवृत्ति प्रवृत्तिहिन रहेको देखिन्छ। यसले बजारमा लगानीकर्ताहरु अन्योल अवस्थामा रहेको संकेत गर्दछ। लगभग एक महिनाको प्रवृत्तिले ‘फलिङ्ग वेजेज’ र ‘एसेन्डिङ्ग ट्रायङ्गल’ दुबै आकृति बनाएको देखिन्छ। पहिलो आकृतिले वियरिस र दोस्राले वुलिस संकेत गरे पनि दोस्रोे आकृति कमजोर देखिन्छ र यी दुबै आकृति पूर्ण भइसकेको छैन।
१४ दिनको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए)भन्दा नेप्से प्रवृत्ति माथि रहेकाले बजार हालसम्म बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको संकेत गरेको छ र हाल यो ईएमए टेवाको रुपमा देखिएको छ। रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स ६५ दशमलव ९२ अंकमा रहेको छ। बजारको प्रवृत्तिसँग आरएसआई र परिमाणलाई तुलना गरेर हेर्दा दुबै सामान्य देखिएको छ।
निष्कर्ष : हालसम्म नेप्से प्रवृत्तिहरु र सूचकहरुको आधारमा यदि बजार १३३५ भन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार केही सकारात्मक हुन सक्ने संकेत गर्दछ। अर्को तत्कालीन प्रतिरोध १३५० देखि १३६० को क्षेत्रमा रहको देखिन्छ। त्यस्तै, यदि बजार १३०० भन्दा तल रहेमा बजार केही सच्चिन सक्ने देखिन्छ र अर्को तत्कालीन टेवा १२७० देखि १२८५ को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ।
Published Date: Saturday, 25th May 2019 12:02:21 pm